Sipa komika izay mpamorona sary ihany no hahatakatra | Famoronana an-tserasera
Tsy mora velively ny fiainan'ny mpamorona sary. Na izany aza, ireo olana rehetra ireo dia miseho isan'andro ihany koa mety ho lasa anekdota mahatsikaiky izany, rehefa tsaroana, ataovy mihoatra ny tsiky fotsiny isika. Mazava fa ny zava-drehetra dia miankina amin'ny prisma izay ahatarana ireo traikefa ireo. Avy amin'ny Creative Market izy ireo dia namorona andian-tsary tena tsara izay mihodina manodidina ny asan'ny mpamorona sary.
Fitiavan-dratsy amin'ny endritsoratra Helvetica, mpanjifa mikorontana, ilay karazana mpanao sary an-tanàn-dehibe mahaliana… Ary snsetera lava be. Tsara ho fihomehezana ary fampaherezana kely alohan'ny hiverenanao hiasa amin'ny fanombohan'ny taona vaovao. Ankafizo izy ireo!
Tantely… Mahatsiravina ianao.
Nandresy toy ny sosona 50 aho tamin'ity fahavaratra ity.
Mety hahita endritsoratra tsara kokoa noho Helvetica ianao.
(Loharano 6.532 taty aoriana ...)
Helvetica no tsara indrindra!
Tian'ity mpanjifa ity ho lasa loko vaovao ny famantarana. Iray izay mbola tsy hita.
Izany no antony avela hisotro toaka any am-piasana.
Nahazo an'ity tany Pantone 18-1438 ity?
Ny sain'ny mpamolavola: loharano hafa noho i Helvetica.
Matahotra aho sao afaka mandroaka olona noho ny mikasika ny efijery.
Hey, manana ny kinova farany fahatelo amin'ilay logo nalefako taminao ve ianao?
Ie! tianay. Nanao retouching fotsiny izahay.
Manoratra fanevatevana i Brett ...
Tian'ilay mpanjifa ho elefanta aho… Ho rahampitso.
Azo atao somary lehibe kokoa ve ilay logo?
Tsy haiko ry bro ... Tsy manana an'io wow factor io izy.
Mbola miakanjo isan'andro ve ianao na dia miasa any an-trano aza?
Eny, na eo aza ny zava-drehetra tena matihanina aho.
Inona ilay endri-tsoratra mampihomehy?! Ary amboary ny kerning!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Sipa komika izay tsy hain'ny mpamorona sary fotsiny
Fernando Jose Velasco Millano dia hoy izy:
Ny fiainako amin'ny endrika roa.
Valiny tamin'i Fernando José Velasco Millano
Hahaha azoko ny sasany tamin'izy ireo satria miasa miaraka amina mpamorona maro aho
ho azy ireo dia arahabaiko noho ny faharetany! Ao amin'ny Workana Studio dia miara-miasa amin'izy ireo aho ary fantatro fa ohatra ny saka marina! haha